Karma Wiricheya - Zvigadzirwa Zvekurapa - United States
musha / Karma Mawiricheya
Chero Chigaro Saizi14 "Chigaro16 "Chigaro18 "Chigaro20 "Chigaro22 "Chigaro24 "Chigaro26 "Chigaro28 "Chigaro30 "Chigaro
Nezve Karma Wiricheya
Karma ine nhoroondo refu yepasirese ine mavambo mumusika wakakura kwazvo muAsia, iri Taiwan. Nhoroondo yeBrand inotanga mu1987 ine hwaro hweKarma Medical Corporation. Karma ndiyo yaive kambani yekutanga kuburitsa aruminiyamu-furemu mawiricheya uye kubvira ipapo yakura ikava imwe yeakakura eAsia, anonyanya kupa mawiricheya vanopa.
Ichishanda pamwe nekubatana nevarapi munyika zhinji pasirese, Karma Medical Corporation yakaisa mari yakawanda mukutsvagisa nekusimudzira uye inobata zvinopfuura zana patent, kusanganisira akawanda maindasitiri-akajairwa matekinoroji. Karma ine pamusoro pekutengesa mazana masere uye nzvimbo dzekutsigira munyika dzinopfuura makumi mana.
Karma yasvika pachinzvimbo chayo semutungamiri weindasitiri nekugara uchizvibvunza kuti:
Tingaite Sei Kuti Isu Mawiricheya Edu Anokwana Vashandisi Vedu?
Tinotenda kuti wiricheya inofanirwa kuonekwa sechinhu chakakosha muhupenyu hwevanhu. Mukugadzira edu mawiricheya, isu tinofunga nezvemushandisi kutanga. Mawiricheya edu akagadzirwa kuti akwane nharaunda yemushandisi, mamiriro ekurapa nemuviri.
Ichi zvakare ndicho chikonzero chikuru chekuti tifunge kugadzira yakazara mawiricheya, tichitanga nehuremu hwakareruka uye husingatakurike hwekufambisa wiricheya kusvika kune chese chega chinogadziridzwa cheWhite-End simba wiricheya inosanganisira yakakosha madhiraivho uye kutonga kwezvakatipoteredza.
Mhuri yechigadzirwa yakakwana ichatibatsira mukutsigira zvinodiwa nemushandisi kusvika kumax.
Iwe hautarise hunhu muchigadzirwa. Iwe unofanirwa kuivaka mukati.
Karma mhando sisitimu yakadzika midzi mune fungidziro yeTotal Quality Management (TQM).
Yakavakirwa TQM, isu tinovaka IQC, IPQC, FQC, uye QA masisitimu mune ekugadzira maitiro.
Zvekuongorora uye kuyedza, Karma yakavaka yakanyatso nzwisisika CE yekuyedza system muAsia wheelchair indasitiri, inosanganisira Statistics kugadzikana bvunzo, kukanganisa bvunzo, maviri-dhiramu bvunzo, kudonhedza bvunzo, kuramba kumusoro masimba mauto bvunzo, kuramba kudzika kwemauto bvunzo, munyu pfapfaidzo bvunzo , nezvimwe.
Kuwedzera kubva pamakore makumi maviri ezviitiko zvekugadzira, Karma yakagadzira zviyero zviviri zvemukati zve "S-curve nzira bvunzo" uye "Rigorous nzira bvunzo" kuwedzera iyo Durability Ongororo.
Iyi huzivi hwave chikamu chakakomba cheKarma's DNA kubva pakatangwa kambani muna 1987, uye Ongororo & Kubudirira uye kushambadzira kwemaki kwagara kuri pakati mukukura kweKarma.
"Fit *" ndiyo yakakosha kukosha kweKarma brand. Ethu maR & D zvikwata, zvisinei nekwavari, zvakanyanyisa kutevedzera iyi yekupedzisira inotungamira musimboti mukugadzirwa kwezvigadzirwa zvitsva. Ndokunge, zvigadzirwa zvedu zvinofanirwa:
1. kukodzera muviri wemushandisi.
2. kukodzera mamiriro ekurapa emushandisi.
3. kukodzera nharaunda yemushandisi.
Aya mafungidziro matatu epamoyo akave nechokwadi chekuti zvigadzirwa zveKarma zvinoteerera zvakananga kune zvatinoda vatengi.
Sezvo tekinoroji yekubatsira kwekufamba ichiramba ichibuda, uye kuti Europe neAustralia vari kutungamira, Karma yakagadzira dhizaini nenzvimbo dzehunyanzvi munyika dzinoverengeka.
Nekubatirana neyekutanga-kirasi varapi uye yepamusoro-notch dhizaini matimu munzvimbo dzakawanda, Karma inogara pamucheto wekucheka kweruzivo nekusimudzira tekinoroji.
Kunyangwe iri cheya wiricheya yakagadziriswa, chigaro chakamira, chigaro chechinangwa, kana chimwe chigadzirwa chekufambisa, chimwe nechimwe chezvigadzirwa zvedu zvakanyatsogadzirwa nemazwi evatengi vedu, zvido, uye zvishuwo mupfungwa.
Kana zvasvika pane zviitiko zvevashandisi, tinoedza kuva "nehanya," "vanonzwira tsitsi," uye "vanotaurika navo."
Kuburikidza nekuzvipira kwedu uye kufunga kwedu, tinotarisira kuunza kuwedzera kuvimba, mufaro, uye rudo rwehupenyu kune avo vane hunyanzvi hwepanyama pasirese.